Qaybtii danbe ee ciyaarta oo mar dhaw bilaabatay & gobolka Bari oo Goolkii 2-aad dhashaday. – Radio Daljir
Qaybtii danbe ee ciyaarta oo mar dhaw bilaabatay & gobolka Bari oo Goolkii 2-aad dhashaday.
Diseembar 22, 2009 12:00 b 0
Garowe, Dec 22- Mar dhaw ayey bilaabatay qaybtii danbe ee ciyaarta kama danbaysta ah ee lagu lagu hanan doono koobka ciyaaraha gobollada Puntland, waxaana ay hadda ciyaartu maraysaa 2-0, waxaana labadaasi gool la yimid.
Ciyaarta ayaa si dar dar leh uga socta garoonka Mire Awaare ee magaalada Garoowe, waxaana daawanaya daawadayaashii ugu badnaa oo ka soo qaybgala fiirsashada ciyaaraha gobollada Puntland ee dhawaan bilowday.
Qaar badan oo ka mid mas’uuliyiinta dawladda ayaa ku sugan garoonka, kuwaasi oo sugaya cidda la guddoonsiin doona Koobka galabta, kaaso oo hadda dhaxyaalka garoonka.
Idaacadda Daljir http://daljir.com/
3 dhimasho ah & 10-neeyo dhaawac ah oo uu sababay iska-horimaad hubaysan oo ka dhacay Galkacyo.
Hawlgallo amni oo ka socda Garoowe & dad lagu tuhusan yahay weererkii afhayeenka baarlamaanka oo la qabtay.